Iindlela ezintathu zokuqinisekisa ukuba ukuBandakanyeka kweScreen esincinci kunempembelelo enkulu | Martech Zone
Iindlela ezintathu zokuqinisekisa ukuba ukuBandakanyeka kweScreen esincinci kunempembelelo enkulu
NgoLwesihlanu, Meyi 28, 2021 NgoLwesihlanu, Meyi 28, 2021 UJuli Greenwood
Ngaphandle kwamathandabuzo ubhubhane utshintshe isimilo sokuthengwa kwabathengi kunye nolindelo olukhokelayo kubathengisi ukuze bafumane iindlela ezintsha nezingcono zokuzibandakanya kwi-Intanethi. Ngaphezulu kokunyuka kwenkcitho kwi-Intanethi kwi-2020 ukuya kwi-44 yeepesenti ukusuka ngo-2019 ngaphezulu kwe- $ 861 yezigidigidi e-US -Kukho ukwanda okukhulu kukhetho lokufezekisa kwi-intanethi, nge I-80% yabathengi ulindele ukonyusa ukusetyenziswa kwabo kwe-Thenga-kwi-Intanethi-kwiVenkile- eSitolo (IBOPIS) kunye ne-curbside pickup kunye ne-90% ngoku ekhetha ukuhanjiswa kwekhaya kutyelelo lwevenkile.
Abathengi banemali kunangaphambili xa kuthengwa kwi-Intanethi kwaye oku kutsha kunye nokwanda kokuthenga okuthuthuzelayo kwihlabathi lanamhlanje ledijithali kuya kuba neziphumo zexesha elide. Kungenxa yoko le nto iibrand kufuneka ziqinisekise ukuba yonke indawo yokubamba ibonwa kuqala, iyakhawuleza, kwaye ayinasiphako, nokuba baphi ababukeli kunye nabathengi. Unikezwe ukuba phantse iipesenti ezingama-80 zabasebenzisi be-smartphone ngoku bayathenga kwizixhobo zabo eziphathwayo, kukho ithuba elikhulu lokufumana izixhobo ezincinci zabathengi.
Amandla ezikrini ezincinci athatha ezinye izibonelelo ezingezozincinci kubandakanya ukwanda kokuzibandakanya, ukuguqulwa, kunye nokunyaniseka kwegama ixesha elide. Iibhranti kufuneka ziqwalasele iindlela ezintathu ezithile-ividiyo encinci, ii-microbrowsers kunye nokwenza izinto ezihambisayo-ukuqinisekisa ukuba bafikelela ngokufanelekileyo kwinani elikhulayo labasebenzisi be-Intanethi.
Kwiminyaka yeTikTok kunye ne-Instagram Reels, abathengi bayaziqhelanisa neziqwengana ezimfutshane zokuzonwabisa okanye ulwazi kwifowuni yabo. Iibhranti kufuneka zixhamle kule ndlela ngokwenza iiklip zevidiyo ezithi zikhawuleze ziqwalasele ababukeli kwaye zibenze bonwabe kwaye bazibandakanye. Ngemizuzwana nje yomxholo, iimveliso zinokuhambisa umyalezo okhangayo owonyusa ukujonga kunye noguquko.
Umxholo wevidiyo encinci ziimizuzwana nje eyi-10-20 ubude, oko kuthetha ukuba ii-brand zinexesha elifutshane lokuqinisekisa ukuba yonke iklip ihanjiswa ngaphandle komthungo kunye nokubanakho konke. Ukufezekisa oku, iimveliso kufuneka ziqale ziqinisekise ukuba umxholo uhlengahlengisa ukugcwalisa isikrini sazo zonke izixhobo, nokuba yikhompyuter yedesktop, ithebhulethi okanye iselfowuni. Yonke imixholo kufuneka ihlengahlengiswe umzobo okanye imbonakalo yomhlaba ukuthintela ubungakanani be-tuli obungaphula ubeko lwephepha, ukugqwetha umfanekiso okanye ukubonisa imivalo emnyama ejikeleze ividiyo. Abathengisi kunye nabaphuhlisi banokusebenzisa i-AI kunye namandla okufunda ngomatshini ukwenza ngokufanelekileyo ukwahluka kwevidiyo nganye efunekayo kubungakanani bonke bescreen, ukuqhelaniswa kunye nezixhobo.
Ukongeza, abathengisi kunye nabaphuhlisi kufuneka baqwalasele ngononophelo kwisicatshulwa esihambelana nevidiyo nganye, kubandakanya umxholo kunye nemixholo engezantsi. Ezi zinto zibalulekile kumxholo obonelela ngemeko kumbukeli, ngakumbi kuba I-85% yomxholo wevidiyo kubukelwe kuFacebook kujongwa ngaphandle kwesandi. Ukongeza, ukubonelela ngemibhalo engezantsi kubalulekile ukuthobela ukufikelela kunye nezikhokelo ze-ADA. Ukusetyenziswa kwe-AI kunokuvelisa ngokuzenzekelayo isicatshulwa kunye nokufaka izihlokwana kwividiyo nganye.
Bopha amandla eMicrobrowsers
IiMicrobrowsers kukubonwa okuncinci kwesiza esanda ngaphakathi kwiingxoxo kwiinkqubo zemiyalezo yabucala ezinje ngeSlack, WhatsApp kunye neFacebook Messenger. Umzekelo, cinga malunga xa uthumele umama wakho ikhonkco leMessage kwiibhutsi kuluhlu lwakho lomnqweno wokuzalwa. Iwebhusayithi yomthengisi ivelisa ngokuzenzekelayo umfanekiso ohambelana nomfanekiso okanye ukujonga kuqala ividiyo. Oku kuyamnceda ukuba abone ukuba yeyiphi na ikhonkco kwaye akhe umbono wokuqala wophawu, ekonyusa amathuba okuba acofe kwaye athenge ezo bhutsi njengesipho.
Ezi linki ze-microbrowser zibonelela ngamathuba amakhulu okuzibandakanya athi ngelishwa amaxesha amaninzi angawahoyi. Amanqaku kufuneka aqinisekise ukuba le mifanekiso okanye iividiyo ziboniswa ngokufanelekileyo kuyo yonke ingxoxo kunye nokuthumela imiyalezo, kunye nomsila omde wezinye izikrini ezinje ngezixhobo zomdlalo ophathwayo kunye nezixhobo ezifanelekileyo.
Abaphuhlisi kufuneka baqiniseke ukuba amakhonkco ayavuleka ngaphakathi kweemicrobrowsers ngu:
Ukuchaza yonke into kwimakhaphu ye-HTML, kunye nokukhawulezisa isihloko kumagama ali-10 kunye nenkcazo kubalinganiswa abangama-240
Soloko usebenzisa iGrafu evulekileyo njengophawulo kwiakhawunti yee-microbrowsers ezahlukeneyo
Ukukhetha umfanekiso othile we-unfurl obonakala ubonakala kwaye unyanzela ummkeli ukuba acofe ulwazi oluthe kratya
Sebenzisa ividiyo emfutshane "yee-nanostories" kwii-microbrowsers ezimbalwa ezibonisa ividiyo ngoku
Ngokulandela ezi ngcebiso, iimveliso zinokwenza uninzi lomxholo wazo we-microbrowser kwaye ziqhube iingcebiso zontanga ezikhokelela kunqakrazo nakwintengiso. Ukongeza, banokusebenzisa idatha ukubonelela ngeepateni zabaphulaphuli kunye nezinto abazikhethayo, kunye nokuba ingakanani na itrafikhi evela kubathumeli boontanga, okanye "kwintlalo emnyama." Ukugcwala kwe-microbrowser engathanga ngqo lithuba legolide kubathengisi-idatha ethe kratya ukuba ngubani owabelana ngezixhumanisi ngezabelo zabucala kunye neengxoxo zeqela, kokukhona banokuwukhulisa umxholo kunye namandla okuhanjiswa.
Yenza indawo yeSelfowni ibe lula
Njengabathengi bathembela ekuthengeni kwi-Intanethi ngakumbi nangakumbi, kubaluleke ngakumbi ngakumbi ukuba iimveliso zibonelele ngemithombo yewebhu etyebileyo elayisha kakuhle kwisixhobo esiphathwayo. Abathengi bafuna amava abandakanyekayo kunye nolungelelwaniso olukhawulezayo noluphendulayo. Abayi kulinda ixesha lokulayisha. Ngapha koko, ukulibaziseka ngomzuzu omnye kwimpendulo yephepha kunokubangela Ipesenti ezili-16 ziyancipha ekwanelisekeni kwabathengi.
Amanqaku kufuneka agxile kumgangatho, ifomathi kunye nobungakanani bee-asethi zabo zedijithali ukuze bafezekise oku kulindelweyo. Imifanekiso, abaphuhlisi kufuneka benze ubungakanani kwakhona bemifanekiso ngokobungakanani obubekiweyo, behlengahlengisa kubungakanani bomxholo, isisombululo kunye nolwakhiwo ukuze zilungele imeko-bume yesicelo. Imigangatho efanayo iyasebenza kwividiyo, ngelixa ithathela ingqalelo umgangatho wevidiyo ukulungiselela iimeko zenethiwekhi zomsebenzisi. Ngokwenza ukuba iwebhusayithi ibe nokuhamba ngokulula, iimveliso zinokuqiniseka ukuba abasebenzisi baya kukonwabela ukungabinamava okuthenga kwi-Intanethi okuqhuba ukugcwala kunye nokuthengisa.
Iziphumo eziKhulu zivela kwiiNkcukacha ezincinci
Kuya kubaluleka ngakumbi kwiimpawu ukuba zijonge kakuhle isicwangciso esincinci sescreen kunye nokuqinisekisa ukuba batyisa abasebenzisi beeselfowuni. Ukubandakanya ividiyo encinci, i-microbrowser, kunye nokusebenza kweyona ndlela isebenzayo kuya kuba yinto ephambili ekufezekiseni ulindelo lwabathengi banamhlanje kwi-intanethi kunye nokuphumelela kwiziphumo ezinkulu kwilizwe elihambayo.
tags: Ividiyo ye-aifacebook umthunywaIiReels ze-Instagramiibrawuza ezincinciividiyo encinciiiklip zevidiyo encinciii microbrowsersukuzibandakanya mobileUkulungiswa kwefowuniIsantya sephepha leselfowunimobile ephendulayoisantya sokuhambai vidiyoIselula-ethandekayoisantya sephephanoluphendulayovidiyoMusaisikrini esincinciTikTokifomathi yevidiyouyilo lwevidiyoubungakanani bevidiyowhatsapp
Ngeminyaka engama-20 yamava kwintengiso, uJuli uphakamisa unxibelelwano kwihlabathi liphela kunye nenkqubo yentengiso yabathengi. Ngaphambi kokujoyina i-Cloudinary, uJuli waqhuba indawo yakhe yokuthengisa ehlanganisiweyo apho waphuhlisa kwaye wenza iinkqubo zentengiso eziyimpumelelo kwiinkampani zobugcisa kunye nezononophelo kunye nokungenzi nzuzo, ukulawula yonke into ukusuka kuphawu lwentengiso kunye ne-PR ukuya kwintengiso yomxholo kunye nemisitho.
I-inboxAware: Ukufakwa kwe-inbhoks ye-imeyile, ukuhanjiswa kunye nokujonga esweni